जान्नुहोस् ! यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि काउली खानुका फाइदाहरु
अप्रील 29, 2019 अप्रील 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments काउली, डा. राम बहादुर बोहरा, स्वास्थ्य
नेपालमा सवैभन्दा बढी उत्पादन हुने तरकारीमा काउली पनि एक हो । नेपालमा सलादको रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । काउली खानु क्यान्सरबाट बच्ने एउटा उत्तम उपाय हो । काउली खानाले क्यान्सरका कोषहरू बनेका छन् भने पनि त्यसलाई बृद्धि हुन नदिई निष्क्रिय पार्दछ । यसमा पाइने ‘ग्लुकोसिनोलेट’ र ‘सल्फोराफेन’ले क्यान्सर लाग्न सक्ने तन्तुहरूलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
काउलीले फोक्सो, स्तन, आन्द्रा, डिम्वाशय र मुत्र थैलीको क्यान्सरबाट बचाउन पनि मद्दत गर्दछ । आजकल समाजमा काउलीबारे गलत धारणा मेडियामा ल्याएको देखिन्छ तर ठोस तथ्य भने देखिएको छैन । कुनै पनि फोहर खाना खानाले स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पर्न सक्छ । यस्ता तरकारी उत्पादन गर्दा मल र किटनाशक औषधि छर्दा काउली फोहर भएको हुन सक्छ ।
फोहर चिजलाई राम्रोसंग सफा गरेर खाएमा कुनै नोक्सान गर्दैन । काउली प्रशस्त खानामा प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । काउलीलाई नुन पानीमा डुबाउने र चिसो पानीले राम्रोसंग पखालेर खानाले पनि काउलीमा भएको किटाणु नस्ट गराई स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा उठाउन सकिने देखिन्छ । काउलीलाई अचार बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ ।
काउलीको अचार बनाउन मसिनो गरी काटेर नुन राखेर सिसाको भाडामा राख्ने एक हप्तामा अमिलो हुन थालेपछी प्रयोग गर्नाले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा उपरोक्त फाइदा लिन सकिनेछ । यसरी राखिएको काउलीमा क्यान्सर विरुद्ध लड्ने रसायनहरूको राम्रो विकास हुन्छ र शरीरलाई फाइदा गर्छ ।
← गालाको रंगबाट थाहा हुन्छ स्त्रीको चरित्र
जन्मको सफलता →
6 thoughts on “स्वास्थ्यको लागि काउली खानुका फाइदाहरु”